Bauh: mpitantana fonosana sary ho an'ny rindranasa Linux misy endrika marobe | Avy amin'ny Linux
Satria, Rafitra miasa malalaka sy malalaka, ahoana GNU / Linux mirona amin'ny fampiharana isan-karazany amin'ny endrika samihafa, ny sasany ilaina kokoa na azo ampiharina noho ny hafa, manana programa toa azy Fivarotana lozisialy, amin'ny endrika iray na maromaro dia ho zavatra tena ilaina foana izy io.
Noho izany, ny fampiharana toa "Bauh", izy ireo dia ho safidy mahaliana sy tsara hafa amin'ny nentin-drazana Mpitantana fonosana tompon-tany (GUI sy CLI) endrika tokana. Satria, naorina hiasa ho Package Manager ho an'ny endrika isan-karazany izy dia toy ny Universal App Store.
Ary alohan'ny hidirany amin'ny antsipiriany momba "Bauh", Tsara homarihina fa misy hafa koa fampiharana mitovy amin'izany antso «App Outlet» izay efa navoakanay teo aloha. Ka raha te hijery ilay famoahana voalaza ianao aorian'ity farany ity dia avelanay eto ambany ny rohy:
"App Outlet dia rindranasa mahaliana izay ahafahantsika miditra ao anaty tontolon'ny fivarotana an-tserasera sy fampiharana mahasoa ho an'ny Operating Systems malalaka sy misokatra, miorina amin'ny endrika fonosana vaovao sy samihafa (Flatpak, Snap ary Appimage) misy." App Outlet: magazay manerantany ho an'ny fampiharana GNU / Linux
1 Bauh: Fandraisana an-tsary hitantanana ny rindranasa Linux
1.1 Inona no atao hoe Bauh?
Bauh: Fandraisana an-tsary hitantanana ny rindranasa Linux
Inona no atao hoe Bauh?
Araka ny anao tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, ny fampiharana "Bauh" (tononina hoe ba-oo), izay fantatra amin'ny anarana hoe "Fpakman" es:
"An iFandraisana an-tsary ny mpampiasa (GUI) amin'ny fitantanana ny rindranasa Linux. Manohana AppImage, Arch (repositories / AUR), Flatpak, Snap ary rindranasan'ny tranonkala teratany."
Anisan'ireo toetra mampiavaka ny "Bauh" ity manaraka ity dia azo tononina:
Tontonana fitantanana: Aiza no ahafahanao mikaroka, mametaka, manaisotra, manavao, mampidina sy mihazakazaka fampiharana.
Fomban'ny fako: Izy io dia manana fahaizana manomboka eo amin'ny lozantsary sy mamoaka fampandrenesana rehefa misy ny fanavaozana ny rindrambaiko.
Famerenana rafitra: Azo ampifandraisina amin'ny fampiharana Timeshift mba hanomezana dingana doso-dàlana tsotra sy azo antoka alohan'ny hampiharana ny fanovana amin'ny rafitra.
Lohahevitra mahazatra: Ahafahana mandanjalanja ny fomba (fisehoana hita maso) ny interface graphique.
Ankoatr'izay, isaky ny karazana format fisie dia manana fampiasa manokana na fetra manokana izy io. Ohatra:
Momba ny fonosana AppImage: Ny fisie AppImage x86_64 ihany no misy amin'ny alàlan'ny mekanisma fikarohana amin'izao fotoana izao. Ary atoro anao ny tsy hametraka na hamono ny AppImageLauncher hisorohana ny tsy fahombiazana mandritra ny fametrahana ny fampiharana an'io karazana io.
Momba ny fonosana Arch / AUR: Mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny rafitra miorina amin'ny Arch ihany. Miatrika fifanoherana mety hitranga, fametrahana fonosana tsy hita na tsy voatery ary avy amina loharano samihafa Ankoatr'izay, mamela ny fidirana amin'ny detector-reblock.
Momba ny fonosana Flatpak: Mamela ny fampiharana an'ity karazana ity miaraka amina fanavaozana tsy raharahaina ho faritana amin'ny alàlan'ny fisie «~/.config/bauh/flatpak/updates_ignored.txt» ary ny zava-drehetra mifandraika amin'ity endrika ity dia azo alamina amin'ny alàlan'ity rakitra fikirakirana manaraka ity: «~/.config/bauh/flatpak.yml».
Momba ny Snap: Ahafahanao mamelombelona (manavao) ny fanitsiana ankehitriny ny fampiharana Snap napetraka. Manaova fanovana ny fantsom-pahalalana mitovy ary ny zavatra rehetra mifandraika amin'ity endrika ity dia azo alamina amin'ny alàlan'ity fisiefitra manaraka ity: «~/.config/bauh/snap.yml».
Momba Webapps: Mamela ny famoronana Webapps amin'ny alàlan'ny fanondroana URL sy data vitsivitsy vitsivitsy fotsiny.
Satria, a fampiharana python ary apetraka amin'ny Pip manager, mila apetrakao fotsiny miaraka amin'ireto baiko tsotra manaraka ireto ianao:
naoty: Raha mila fanazavana fanampiny momba "Bauh" azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany ofisialy amin'ny tranokalan'i Paosy fonosana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Bauh», interface graphique (GUI) mahaliana sy tena ilaina (namboarina) namboarina ho mpitantana fonosana amin'ny endrika samihafa, amin'ny fomba fiasa ho fivarotana fangatahana manerantany na marobe; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Bauh: mpitantana fonosana sary ho an'ny rindranasa Linux misy endrika maro